HomeSoomaalida oo isaga carartay tuulada Forserum
August 22, 2012 Uncategorised 16
Soomaalida ku nool tuulo ka tirsan kamuunka Nässjö oo lagu magacaabo Forserum ayaa waxaa la soo daristay cabsi weyn ka dib markii mudo lagu haayay weeraro joogto ah. Soomaalida ayaa sadex isbuuc oo isku xigta waxaa dhagaxaan lala dhacay xafiiska jaaliyada, qaar ka mid ah Soomaalida ayaa gacan loo qaaday iyaga oo wadada maraya iyo caruurtii oo waxyeelo la gaarsiiyay.
Telefishinka Sweden oo wareysi la yeeshay qaar ka mid ah Soomaalida ku hartay magaalada ayaa sheegay in ay ku noolyihiin cabsi saa’id ah. Jaaliyada Soomaalida ayaa hada ku talisay in dhamaan Soomaalida ku nool tuuladaas ay isaga guuraan maadaama uu amaankooda qatar ku jiro. Tuulada Forserum ayaa sanadkii hore waxaa ku noolaa Soomaali gaaraysa 160 qof balse hada ayaa waxaa ku haray 60 qof oo keliya oo hada la filayo in ay isaga cararaan goobtaas.
Caruurtii ayaa la sheegay in ay aadi waayeen iskuulada. Cida masuulka ka ah dhibaatada lagu haayo Soomaalida ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay tiro dhalinyaro ah. Booliska ayaa arinta la gaarsiiyay balse aan si fiican wax uga qaban.
Boolisku way yimaadaan oo waxay qortaan magacyo iyo marqaatiyaal balse waxba ma sameeyaan. Dadka magaalada inta badan waa fiicanyihiin balse kooxyar ayaa dhibaato nagu haya – Ayuu yiri Abdula Abdi Dhinbil oo ka tirsan Soomaalida yar ee magaalada ku hartay.
Booliska magaalada Eksjö ayaa sheegay in ay soo gaareen dacwooyin la xiriira arintaan, waxay sheegeen in ay hada hawsha ku jiraan oo arbacada ay war ka soo saari doonaan. Mar aan isku dayay in aan la xiriiro Soomaalida ku nool Forserum ayaysan ii suurto galin in aan helo cid telefoonka iga qabata.
Soomaalida ayaa laga doonayaa in aysan magaalada isaga cararin balse ay isku xirnaan sameeyaan, waxaa wanaagsan in ay wadajir la sameeyaan dadka magaalada iyo maamulka si arinta u soo shaacbaxdo. Haddii ay ku guuleystaan dhalinyaradaan in ay Soomaalida ka raraan Forserum ayay noqon kartaa wado u furantahay cunsuriyiinta meelkasta oo ay joogaan.